Kuya kubakho i-Samsung Galaxy S10 Lite, ezi ziimpawu ezinokubakho | I-Androidsis
Ngenxa yokuvuza okuninzi, kuyaziwa ukuba uphawu lwaseKorea olusekwe eSeoul luya kuphehlelela i-S entshai-Samsung Galaxy S10 Lite, I-smartphone ephezulu ehlangabezana nokulindelwa okuphezulu ngokweedatha ezaziwa kancinci kancinci.
Kwaye siyazi ukuba inkampani yaseKorea ayinelisekanga kukuncinci, kwaye kule meko igqibe kwelokuba ikhuphe i-Lite version ye-smartphone entsha eya kuthi ikhutshwe kwangaxeshanye, I-Samsung Galaxy S10 ekudala ilindelwe kwaye injongo kukuba imodeli yale fowuni inomtsalane kangangoko kunokwenzeka, sithetha ngesixhobo sayo kunye nexabiso.
Ezinye izinto siye sakwazi ukufumanisa malunga ne entsha ye-Samsung Galaxy S10 Lite, kodwa into esiyaziyo kwaye eyothusayo ngokwenene, kukwazi ukuba iyakuba neprosesa yeQualcomm, oko kukuthi, sithetha nge-SoC engundoqo ezisibhozo, i-Snapdragon 8150, enika iselfowuni uphawu lwenyani lweprimiyamu.
Iipropathi ezintsha ze-Samsung Galaxy S10 Lite ye-smartphone
Sonke siyayazi loo nto iimpawu Sijonga ngaphambi kokuthenga ifowuni, yi-RAM, kwaye kule meko ikamva le-Samsung liya kuba neenketho ezimbini, enye ye-4GB enye ye-6GB, into exhaphakileyo ukuyifumana kusapho lakwaSamsung, kodwa bobabini bangabaleka Akhongxaki Android Pie. Emva koko, ukugcinwa kuya kuba neendlela ezimbini, i-64GB okanye i-128GB.
Njengoko bekulindelekile, kwintsha I-Samsung Galaxy S10 Lite Umfundi weminwe uya kufakwa, oya kuba kwicala lesixhobo, nangona inokubonakala ngathi iyinto entsha, ayiloxesha lokuqala ukuba iSamsung ifake iminwe yokufunda kwisiza esinye. Ukongeza koku, kunokwenzeka ukuba ikhamera ngasemva inee-sensors ezimbini.
Ngokuphathelele eyakhe isikriniSiyazi ukuba i-Samsung Galaxy S10 Lite entsha iya kuba nee-intshi ezintandathu, kwaye yona iya kuba noyilo lwe-Infinity-O eya kubandakanya inotshi yesikrini, kwaye ikhamera iya kuba phezulu.
Umhla wokuboniswa kwefowuni uza kuba ekuqaleni konyaka, kanye ngoFebruwari, ngenjongo yokuhambelana ne-Samsung Galaxy S10 entsha. Okwangoku sinokulinda kuphela ukuba sazi amaxabiso aso, okwangoku awaziwa, kodwa senza uqikelelo oluncinci, siyakholelwa ukuba xabiso ye-Samsung Galaxy S10 Lite ye-4GB ejikeleze i-575 euros, kunye ne-6GB ejikeleze i-euro ezingama-665.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Kuya kubakho i-Samsung Galaxy S10 Lite, ezi ziimpawu zayo ezinokubakho